सामान्य घ’रया’सी वि’वा’दका कारण घरबाट नि’स्किएकी युवतीको श’व फे’ला ! – Taja Khawar
सामान्य घ’रया’सी वि’वा’दका कारण घरबाट नि’स्किएकी युवतीको श’व फे’ला !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १३, २०७८ समय: १८:५०:४१
May 27, 2021 18
बागलुङ : काठेखोलामा एक यु”वतिको श’व फे’ला परेको छ । काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर १ चनौटे की १७ वर्षीया छायाँ थापाको श’व अ’क्ष’ते खोला किनार फे’ला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी इकवाल हवारीले जानकारी दिनुभयो । सोमबार बिहान खोला किनार श’व फे’ला परेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेको
र खबर पाए लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङबाट प्रहरी प्रमुख कृष्णबहादुर पल्ली मगरको टोली घ’ट’ना स्थलमा पुगेको थियो । घरमा सामान्य वि’वा’द हुँदा उनले भि’रबाट हा”म फा’ले’को हुन सक्ने प्रहरीको प्रा’र’म्भी’क अ’नु’स’न्धा’नबाट खु’ले’को इकवाल हवारीले आदर्श अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो । यस विषयमा थप अ’नु’स’न्धान भइरहेको प्ररीले जनाएको छ । युवतीको श’वको पो’स्ट’मा’र्ट’म गरि परिवारले बुझेको हवारीको भनाई छ । आदर्श अनलाइन,
बागलुङमा आउँदो जेठ १२ गतेदेखी दोस्रो चरणको कोभिड खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ । सोमबार बसेको जिल्ला खोप समन्वय समितिको बैठकले जेठ १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गर्ने निणर्य गरेको हो । पहिलो चरणको खोप लगाएर छुटेका अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरुलाई मात्रै यो पटक खोप लगाईने छ । खोप लगाउनका लागि जिल्लाभर दशवटा केन्द्र तोकिएको छ । तत्कालका लागि स्वास्थ्य कार्यालयसँग ९ सय ३० भायल कोभीशिल्डको खोप मौज्दात रहेकाले सोही खोप दोस्रो डोज लगाउन छुटेकालाई लगाईने छ ।
पहिलो डो’ज लगाएर दोस्रो डो’ज नपाएका जेष्ठ नागरिकले भने तत्काल यो सुविधा पाउने छैनन् । समितिको निर्णय अनुसार अग्रभागमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाईकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, जनप्रतिनिधि र पत्रकारले छुटेको दोस्रो डो’ज लगाउन पाउने छन् । File Photo
Last Updated on: May 27th, 2021 at 6:50 pm